Hazvina kumbobvira zvakareruka sevateveri uye vateveri | Martech Zone
Wednesday, April 21, 2010 Mugovera, June 27, 2015 Douglas Karr
Tarisa vatengesi venhau venhau: nhamba yevateveri haisi chiratidzo chakasimba chekukanganisa. Chokwadi ... zviri pachena uye zviri nyore - asi zvakare zvine husimbe. Huwandu hwevateveri kana vateveri kazhinji hauna chekuita nemunhu kana kugona kwekambani kufurira vamwe.
Hunhu hunomwe hweKufurira Pamhepo
Iye anokurudzira anofanirwa kuve achibatanidzwa hurukuro dzakakodzera. Mutambi ane vateveri vejabillion hazvireve hazvo kuti vanogona kukanganisa vamwe nezve chigadzirwa chako kana sevhisi.
Anokurudzira anofanira ita kakawanda uye munguva pfupi yapfuura mukukurukurirana pamusoro wenyaya wakakodzera. Kune akawanda akaraswa mablog, Facebook mapeji, uye Twitter maakaundi kunze uko. Zvemagariro midhiya zvinoda kukurumidza, uye avo vanomira kana kutombomira kwechinguva chidiki vanorasikirwa nesimba rakawanda pane misoro.
Anokurudzira anofanira kunge ari inowanzotaurwa nezvayo nevamwe mukukurukurirana kwakakodzera. Kudzokorora, backlinks uye makomendi zviratidzi zveanogona kukurudzira anokwezva vateereri.
Anokurudzira anofanira ita hurukuro. Hazvina kukwana kupururudza meseji kune vateereri vavo, anokurudzira ane chipo pakupindura mibvunzo yevanhu, kusangana nekushoropodzwa, uye kutaurisa vamwe vatungamiriri munzvimbo. Kupfuura nepano chinongedzo kana Tweet kubva kumukwikwidzi haisi bhizinesi rakaipa, zvinoratidza kuti une hanya chaizvo nevateereri vako uye unoda kuvapa ruzivo rwakanyanya kunaka.
Anokurudzira anofanira kunge aine mbirikiro. Kunyangwe iri dhigirii, bhuku, blog, kana zita rebasa… anokurudzira anofanirwa kuve nemukurumbira unotsigira ruzivo rwavo rwezvinhu zvine chiremera.
Anokurudzira anofanira chinja vateereri vavo. Kuve netani yevateveri, tani yetweets, uye toni yezvinongedzo zvakadaro hazvireve kuti kune pesvedzero. Kufuridzira kunoda shanduko. Kunze kwekunge anokurudzira anogona kukanganisa sarudzo yemunhu yekutenga chaiko, havasi ivo vanokurudzira.
Kufuridzira hakukure nekufamba kwenguva, kunochinja nekufamba kwenguva. A chinja pesvedzero inogona kuuya sekungoita kuti yako yekubatanidza yataurwa kana retweet neimwe inokurudzira. Kungoti nekuti mumwe munhu aive nevateveri zviuru zana gore rapfuura hazvireve kuti ivo vachiri kufurira nhasi. Tsvaga vanokurudzira vane simba sekuonekwa kuburikidza nekuenderera mberi kukura.
Pane zvakasarudzika here? Ehe zviripo. Ini handisi kusundidzira izvi semutemo - asi ini ndinoshuvira kuti masisitimu anoona uye anokwezva pesheni paInternet airege kuita husimbe uye otanga kupa kumwe kuongorora kwakaomarara pane hunhu hunoumba munhu ane simba.
Tags: simbakloutklout zvibodzwakuyera simba
Iwe Uri Kubhadhara Zvakadii Mahara Ongororo?
Apr 21, 2010 pa 3: 53 PM
Ini ndinofunga ichi posvo chiri pachena pane. Saka vazhinji vanobatwa muhuwandu hwevateveri uye retweets zvekuti vanokanganwa nezvechokwadi ROI yemasocial network. Kana iwe ukasabatana nevateereri vako, ivo vangangoita kuti vateerere iwe. PaInternet kana kumeso-ne-kumeso, vanhu kashoma kuti vateerere iwe kana ukasatora nguva yekuteerera nekubatana navo futi.